अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिने, को बन्ला अब अर्थमन्त्री ? — नयाँ कुरा
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिने, को बन्ला अब अर्थमन्त्री ?
२०७७ भाद्र १९ , शुक्रबार
यसैबीच खतिवडाको बहिर्गमनसँगै अवको अर्थमन्त्री को हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । अर्थमन्त्रीका लागि नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे चर्चामा छन् । उता, राष्ट्रियसभामा जाने निश्चित भएका वामदेव गौतमले पनि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रालयको दावी गर्दै आएका छन् । तर गौतमको हकमा संसदको यो कार्यकालमा मन्त्री बन्न संविधान बाधक देखिने भएको छ ।